Mba 4 Mgbụsị akwụkwọ 2017 - Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Mba 4 Mgbụsị akwụkwọ 2017
"N'abalị ndị a na-ese onyinyo" dị ka ha na-ekwu n'akụkụ ndị a n'oge mgbụsị akwụkwọ. Ya mere, iji mee ka uche gị dịkwuo ọkụ n'obi, ebe a bụ akụkọ ole na ole na akụkọ akụkọ banyere Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ na ọrụ anyị n'ime ọnwa ole na ole gara aga. Anyị etinyeghị ihe niile anyị mere ka ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ ndị dị na ozi ụlọ akwụkwọ anyị kwa izu na website ma ọ bụ n'ime anyị Twitter na-eri nri.
Na-achọ ka ị bụrụ oge ezumike dị ụtọ mgbe ọ bịara. Udo na ịhụnanya diri gị niile n'aka onye ọ bụla na Thegwọ Ọrụ .gwọ.
Ntuziaka RCGP maka Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Gị Brain na Porn site Gary Wilson
"Ebe ohuru ohuru" - RCGP Adolescent Health Conference
TRF Research bipụtara
Forlọ Ọrụ Maka Ntorobịa na Ikpe Ikpe Ikpe Ikpe Ikpe
Mmekọahụ Scotland - Mmekọahụ na-enye ọzụzụ maka ndị di na nwunye
Edinburgh Medico-Chirurgical Society (tọrọ ntọala 1821)
Ọha maka Ọganihu nke Ahụ Ike Mmekọahụ (SASH)
Òtù Ndị Ntorobịa nke Ndị Ntorobịa, Ndị Nzuzu Na-eche Banyere Porn na The Coolidge Effect
Ụlọ ọrụ Royal nke General Practitioners kwadoro Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ ahụ iji nyefee ọzụzụ ndị ọkachamara na-aga n'ihu (CPD) maka GP banyere isiokwu nke mmetụta nke ịntanetị na-ahụ maka ahụ ike na ahụike. Akwụkwọ ikike ahụ na-agbakwunye ndị òtù ọ bụla nke ụlọ ọgwụ ndị ọzọ na Royal Royal na UK na Ireland.
Anyị ga-enye ihe ndị a dị ka ebe obibi nke otu ụbọchị. Onye ọ bụla ga-atụle 7 CPD isi. Ndị ọkà mmụta banyere nkà mmụta sayensị, ndị nọọsụ, na ndị na-agwọ ọrịa nabatara. Dị ka ndị ahịa ọgwụ ga-achọta n'oge na-adịghị anya iji nye ndị mmadụ aka na-achọ ọgwụ ndị na-adịghị mma maka nrụrụ erectile, anyị ga-ejikọta ha na ha. Atụmatụ ahụ bụ ịmalite ịmepụta ogbako na January. Lezie anya maka nkọwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu ihe ọmụma na ebe obibi dị ugbu a, biko kpọtụrụ mary@rewardfoundation.org.
Brain gị na Porn site na Gary Wilson
The mbipụta nke abụọ nke akwụkwọ a magburu onwe ya dị ugbu a.
Edere Brain gị na Porn na asụsụ doro anya kwesịrị ekwesị maka ọkachamara na onye nkịtị ma gbanye mkpọrọgwụ na ụkpụrụ nke neuroscience, akparamaagwa akparamaagwa na evolushọn tiori enwere m ike ikwenye na nyocha Wilson dabara nke ọma na ihe niile m chọtara. ”
Prọfesọ Frederick Toates, Mahadum Open, onye edemede nke Olee otú Mmekọahụ na-arụ ọrụ: Enigmatic Urge.
Na 2014, mgbe Brain gị na Porn bu ụzọ bipụtara, ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị na ihe ndị ọzọ dị na nkà na ụzụ maka njikọ mmadụ na-apụtaghị na arụmụka ọha na eze. Kemgbe ahụ, ọdịbendị ndị ọzọ ejiri nwayọọ nwayọọ na-achọpụta na ịhụ na ihuenyo ma ọ bụ ịbanye n'ime isi VR abụghị ụzọ nke ntọhapụ mmekọahụ. Ihe akaebe na-egosi na ọ bụghị ụzọ. Mmekọahụ nke esemokwu, dị na-achọ, nakwa na o yiri ka enweghi ngwụcha dịgasị iche, nwere ike ibute ihe dị egwu na-emetụ mmadụ mma. Ihe omuma omuma ugbua na ejikota uzo eji eme ihe n'adighi nma na nsogbu ahuhu uche. Nyocha iri abụọ na atọ na - ejikọta porn na - enwe nsogbu mmekọahụ ma na - eme ka agụụ mmekọahụ nwee isi. Ihe ise n'ime ha na-atụ aro ihe kpatara ya n'ihi na ndị ikom na-enyocha nsogbu ndị a gwọrọ site n'ịkwụsị ịṅụ ọgwụ.
N'adịghị ka echiche ndị ọzọ, ndị nọ n'afọ iri na ụma na-eji ọrụ GP eme ihe ugboro ugboro dịka ndị ọgbọ ndị ọzọ. Ndị GP anyị nyere na ogbako a kwuru na ha anaghị ajụ ajụjụ ziri ezi nke ụfọdụ ndị ọrịa mgbe ha chere ọnọdụ ụfọdụ ihu. Otu GP kwuru na mkpughe banyere mmetụta porn bụ "dị ka ịchọta mpaghara ọgwụ ọhụrụ ma ọ bụ ịchọta akụkụ ahụ ọhụrụ." Obi dị anyị ụtọ na ngosi ahụ gbadara nke ọma ma dịkwa mkpa maka usoro ọgwụgwọ ha. Ndị dọkịta kwuru na ha kpebisiri ike ịjụ ajụjụ ndị ahụ siri ike n'ọdịnihu.
Nke a mere na ogbako mbụ nke ogbako na Scotland maka ahụike ụmụaka. A na-eme ya na Edinburgh na 17 Nọvemba, ndị RCGP kwadoro ya na ndị ọkachamara na-eto eto na-abịa site na London. E nwere ndị na-ahụ maka nlekọta ahụike 40 na ndị na-ege ntị.
Na February 2017, otu TRF gara 4th Nzukọ Mba Nile na Ahụhụ Ọjọọ na Israel. Nzukọ ogbako a gosipụtara nchọpụta kachasị ọhụrụ banyere mmetụta dị iche iche nke ịntanetị na-emetụta omume. N'iburu mkpa okwu a dị na obodo ndị na-agwọ ọrịa na ndị na-agụ akwụkwọ na-akpali agụụ mmekọahụ, anyị chịkọtara otu isiokwu iji mee nchọpụta a bụ isi maka obodo ndị a.
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Mmekọahụ Mmekọahụ na 4th International Conference on Behavioral Addictions e bipụtara ya Mmekorita nwoke na nwoke na nwanyi online na 13 Septemba 2017. Ọ ga-apụta na mbipụta na Mpịakọta nke 24, Nọmba 3, 2017. A na-enweta mbipụta n'efu site na arịrịọ site na darryl@rewardfoundation.org.
Onye isi anyi, Mary Sharpe ka emere enyi na ndi Centre for Youth & Criminal Justice (CYCJ) nke di na Mahadum Strathclyde na Glasgow. Anyị nwere obi ụtọ. Mary kwuru "Enwere m olile anya na ọ ga - enyere aka ịgbasa ozi nyocha na ọrụ ọpụpụ nke Reward Foundation na ịkwalite onyinye anyị na mmepe nke amụma ọha na eze na Scotland." Mary ga-ekwu okwu na ihe omume CYCJ na 7 March 2018 na Glasgow akpọ: Mkpịsị uhie na mkpụrụ mkpọrọ: Nchịkọta mkpa nke ndị na-adịghị ike na-egbochi ụmụ mmadụ.
E nwere ọtụtụ ihe mere ụfọdụ di na nwunye ji eji eme ihe nkiri. N'agbanyeghị ihe mkpali ahụ, ọtụtụ ndị di na nwunye na-achọ enyemaka site na ndị na-agwọ ọrịa na ndị Scotland. Dị ka Anne Chilton si kwuo, isi nke ọzụzụ n'ebe ahụ, na foto 1990 na-akpali agụụ mmekọahụ bụ ihe gbasara gburugburu 10% nke di na nwunye na-abata maka ndụmọdụ. Taa o kwuru na ọ bụ nsogbu maka 70%. A na-ezo aka na-akpali agụụ mmekọahụ eji eme ihe na-akpata ịgba alụkwaghịm na mmekọrita mmekọrịta n'etiti ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu. O kwuru, sị, "ha maara banyere ọnọdụ ọ bụla metụtara mmekọahụ ma ọ dịghị ihe gbasara mmekọrịta chiri anya."
Iji nyere ndị na-agwọ ọrịa aka ịghọta ma na-emeso ụlọ ọrụ ọhụrụ nke porn jupụtara, a kpọrọ TRF ka ọ kụziere ìgwè ndị ọkachamara kachasị ọhụrụ ọzụzụ. Ndị ọkachamara n'ilekọta nwoke na nwanyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a zụlitere ha na nkà mmụta uche. Taa nghọta nke ịṅụ ọgwụ ọjọọ na nchọpụta na-ahụ maka nhụjuanya na-emetụta ya bụ akụkụ dị mkpa nke ọzụzụ ọzụzụ mmekọrịta ọ bụla. Ọ na-enyere aka atụ iji ghọta otú ụmụ nwoke, ndị bụ isi ndị na-ahụ maka ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'Internet, nwere ike ịbawanye n'ụdị ọkpụkpụ nke ọkpụkpọ egwu ma chọọ nkwụsị nke mkpali na onye ọ bụla na-enweghị ike ịlụ. A maara nke a dịka 'nkwụsị' bụ otu njirimara nke njirimara.
A kụrụ mkpụrụ ahụ ihe dị ka afọ atọ gara aga. N'oge ahụ, onyeisi anyị bụ Mary Sharpe nyere ndị nkuzi ikpe ikpe ikpe banyere mmetụta nke ịntanetị na-eto eto na ụbụrụ ya na njikọ nke ime mpụ. Ndị na-ege ntị lara ezumike nká bụ Bruce Ritson nke ụlọ ọgwụ Royal Edinburgh na onye guzobere SHAAP (Ahụike Health Scott na Nsogbu Mmanya). Idem ama etịbe ke ufọt utịben̄kpọ nditịn̄kpọ ye utịp mmịn odu ke udọn̄ọ eyen. Ha abụọ bụ ihe siri ike pụta, bụ nke, mgbe a na-eji ya karịrị oge, nwere ike imezi ụbụrụ na ọrụ ya, karịsịa na ntụrụndụ na-eto eto nke ndị na-eto eto. N'ezie, nyocha ahụ na-egosi na ụbụrụ nke ndị na-eto eto na-eme ka ndị na-eto eto na-eme ka ha nwee ike ịchọta ihe dị iche iche dị ka ụbụrụ nke ndị na-eri ọgwụ na ndị aṅụrụma mgbe e gosipụtara otu ihe odide.
N'ihi ihe omume a na mkparịta ụka ndị ọzọ, Bruce Ritson ji obi ụtọ kpọọ anyị ka anyị kwusaa okwu mmeghe nke Medico-Chirurgical Society of Edinburgh's 190th ndokwa na October afọ a.
Ndị dọkịta nọ na njedebe nke nlekọta ahụ ike ka ha nwee mmasị mgbe niile na mpaghara ọ bụla nke ahụike na ahụike. Anyị nwere ike ịmepụta ihe ọhụrụ na nchọpụta ahụ, gụnyere akwụkwọ ndị na-egosi na ọbụna 'eji nwayọọ' eji porn (awa atọ kwa izu) nwere ike ịkwụsị isi awọ na akụkụ ndị dị mkpa nke ụbụrụ. Ụmụaka na-eto eto na-eto eto na-esighi ike.
Dị ka onye Board nke òtù ndị America na-esote SASH, a chọrọ onyeisi anyị Mary Sharpe ịga nzukọ ogbako kwa afọ. Ọ bụghị ibu arọ. Ọ bụ ihe obi ụtọ izute ma kwurịta ihe ndị ọhụrụ na-eme n'ọhịa na ọtụtụ ndị ọkachamara, ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na ahụike si n'akụkụ nile nke United States na karịa. N'afọ a, anyị nọ na Salt Lake City, Utah.
Na mgbakwunye na ndị ọkà okwu dị oke nma dịka Prọfesọ Warren Binford bụ ndị kwuru okwu banyere nchọpụta banyere mbibi na-adịgide adịgide nke ndị a na-emegbu ụmụaka (lee ya Okwu TEDx), anyị gbara ajụjụ ọnụ Onye isi ala nke SASH, Mary Deitch, onye ọkà n'akparamàgwà mmadụ zụrụ azụ gbasara iwu banyere ahụmịhe ya na ịme ndị omempụ na-enwe mmekọahụ. Anyị gbara ajụjụ ọnụ nwa okorobịa nọ n'ógbè ahụ, Hunter Harrington, (afọ 17) bụ onye ya onwe ya na-agbake ọgwụ ọjọọ. O meela ka ọ bụrụ ebumnuche ya inyere ndị ọzọ ọnyà siri ike na ebe enwere ike igbochi ndị ọzọ na-eto eto ịlụ ọgụ. Ajụjụ ọnụ a ga-edezi ga-adị na weebụsaịtị anyị mgbe oge ruru.
Òtù Ndị Ntorobịa nke Ndị Ntorobịa, Ndị Nzuzu Na-eche Banyere Porn na Nsogbu Coolidge
Onyinye Ụgwọ ahụ bụ onye nkwado dị mpako na Royal Conservatoire nke Scotland nke ndị na-eme egwuregwu na-eto eto, Wonder Fools, na mmepụta nke Coolidge Effect. Lee Ebe a maka akụkọ mbụ anyị na ya.
Ịgba egwu egwuregwu bụ ihe dị mkpa maka agụmakwụkwọ karịsịa maka ndị na-eto eto na nchegbu dị ha n'obi.